ए’क्कासी ४० प्रतिशत ले घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मूल्य, हे’र्नुहोस् कति पुग्यो ?
Homeसमाचारए’क्कासी ४० प्रतिशत ले घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मूल्य, हे’र्नुहोस् कति पुग्यो ?
March 21, 2021 admin समाचार 2412
सडक सञ्जा’ल नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटेको छ तर मूल्य घट्दा पनि प्रति:सिलन्डिर आठ हजार रुपियाँ तिर्न उप:भोक्ता बाध्य छन् ।
जिल्लाका दक्षि’णी क्षेत्रका तीनवटा गाउँपालिका राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि ४० प्रतिशत मूल्य घटे’को हो । एउटा ग्यास सिलिन्डरको मूल्य आठ हजारमा झरेको स्थानीय जयदेवी शाहीले बता’इन् ।
यसअघि सिमकोटमा मुगुको गमगढीबाट खच्चडमा बो’काएर ल्याएको ग्यासको मूल्य प्रति’सिलिन्डर १४ हजार थिया । करिब ४० प्रतिशत मूल्य घटेपछि ग्यास प्रयोग गर्न थालि’एको उनले बताए । मूल्य घटेपछि हुम्लामा खाना पकाउने ग्यास प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा पनि बढेको छ । यो समाचार आ’जको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
यो पनि , राष्ट्रिय व्यवसायी म’हासंघको नेतृत्वका लागि तीन प्रति’स्पर्धी मैदानमा, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी म’हासंघको भावी नेतृत्वका लागि तीन जनाले महत्वाकांक्षी देखिएका छन् । आगामी चैत ७ गते हुने महासंघको दोस्रो सा’धारणसभा तथा नयाँ नेतृत्वको निर्वा’चनका लागि तीन जनाले अध्यक्षमा उम्मे’दवारी दिएका हुन् ।
अध्यक्षमा व्यव’सायी कुमार कार्की, अञ्जन शाक्य र माधव खरेलको उम्मेदवारी परेको महाधिवेशन तयारी समि’तिका संयोजक गोविन्द कार्कीले जानकारी दिएका छन् । अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका कार्की हाल महा’संघको वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् भने शाक्य महास’चिव र खरेल उपाध्यक्ष हुन् ।
यता,वरिष्ठ उपा’ध्यक्ष र महासचिवमा भने हालसम्म एक–एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको समितिले जनाएको छ । संयो’जक कार्कीका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नयनबहादुर पण्डित क्षेत्रीको एक’ल उम्मेदवारी परेको छ भने महा’सचिवमा पनि रत्न घिमिरेको एकल उम्मेदवारी परेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्य’क्षका उमेदवार क्षेत्री वर्तमान समितिका प्रथम उपा’ध्यक्ष हुन् भने महासचिवका उमेदवार घिमिरे सचिव हुन् । यता,अन्य कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुमा भने ८ खुला उपा’ध्यक्षमा १३ जनाको उम्मेदवारी परेको र अन्य पदहरुमा पनि आवश्यक पद भन्दा दोब्बरले नै उम्मेदवारी परेको महा:संघले जनाएको छ । आगामी शनि’बारका लागि तय भएको निर्वाचन कार्यक्रममा महा’संघले बिहान उद्घाटन सत्र सक्ने र दिउँसो निर्वाचनको गर्ने जना’एको छ । – इताजा खबरबाट
जेठाजुले आफ्नै कान्छी बुहारी भ’गाएपछि, कान्छो भाई रुँ-दै मिडियामा आए (भिडियो सहित)
कैलाश पर्वतबारे आश्चार्यजनक पाँच रहस्य
October 4, 2020 admin समाचार 8607
कैलाश पर्व’तका नाम जोको’हीले सुनेकै हुनुपर्छ । शिव पुराण, मत्स्य पुरणा, स्कन्द पु’राण अथाव भ’गवान शिवको महिमा वाचन गर्दा ‘कैलाश पर्वतको’ नाम र महि’माको ज’ताततै चर्चा हुन्छ । देव’ताका पनि देवता आर’ध्यदेव महादेव र माता
May 31, 2021 admin समाचार 1638
September 22, 2020 admin समाचार 9049